Face book chat history ကိုဘယ်လိုပြန်ရှာမလဲ.... - ကျော်ကျော်ဦး ကျော်ကျော်ဦးဘလော့မှကြိုဆိုပါ၏
Face book chat history manager ကိုသုံပြီးတော့ face book မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ chat ထားတဲ့ စာတွေ ကိုပြန်ရှာလို့ရမယ်နည်းလမ်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်....
အရင်က ကျွန်တော်လဲမသိပါဘူး..face book မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စ ကားပြော ...ပြီးရင်ဘယ်မှာပြန်ရှာမလဲ မသိတော့.... အရမ်းကို စိတ်ညစ်ရပါတယ်... အခုတော့ .internet journal vol.11 No, 26 မှာဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်တာ အဆင်ပြေလို့..သူငယ်ချင်းတ်ို့လဲစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်လို့ ကျွန်တော် ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
၁ )အရင်ဆုံး... add on လေးတစ်ခု ကိုတော့ install လုပ်ဖိုတော့လိုပါတယ်...
Mozilla Firefox အတွက် add on ကို http://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/12338 မှာ download ရယူ ပြီး install လုပ်ပါ...
၂ )install လုပ်ပြီးတဲ့အခါ မှာ.. Mozilla firefox browser ရဲ့ Menu bar မှ
tool menu နှိပ်ကြည့်ပါ..... tool menu ရဲ့အောက်ဆုံးမှာ facebook chat history manager ဆိုပြီးတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်..
၃ )Account အသစ်လုပ်တဲ့အခါ face book ID လိုအပ်သည့်အတွက်..၎င်း Facebook ID ကို tool menu>> facebook chat history manager >>> Get facebook ID ကိုနှိပ်၍ ရယူပါ...
၄ )Face book ID ရပြီဆိုရင်တော့ tool menu >>> facebook chat history manager >>> Create Account ကိုရွေးချယ် Accountအသစ်ပြု့လုပ်ပါ.... Account သစ်ပြု့လုပ်တဲ့အခါ.. get account နှင့်ဆက်စပ်မှု့မရှိသည့်အတွက်....ကြိုက်နှစ်သက်ရာ User name နဲ့ password ကိုအသုံးပြု့နိုင်ပါတယ်...
၅ )Account လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ tool menu >> facebook chat history manager မှာရှိတဲ့ view History ကိုနှိပ်ပြီး. user name နဲ့ password ဖြည့်ကာ . face book မှာ chat ထားတဲ့ စာတွေကို ပြန်ဖက် လို့ရပါပြီ..
11/26/2010 09:08:39 am